Ogaden News Agency (ONA) – War-Saxafadeed ku saabsan Af-duubkii ka dhacay Nairobi
War-Saxafadeed ku saabsan Af-duubkii ka dhacay Nairobi
Warsaxaafadeed ay JWXO qaybisay ayaa lagu sheegay in dad uga soo warama gudaha Itobiya ay soo gaadhsiiyeen in labadii mudane ee laga afduubay Nairobi 26kii Janaayo lagu arkay isbitaalka militariga Itobiya iyagoo ay ku yaalaan dhaawacya culus. Waxay kaloo ay sheegeen in madaxdii la-afduubay ay diideen isku daygii Itobiya ee ahaa inay u hadlaan siday doonayso Itobiya oo ah inay isasoo dheebeen oy la saxiixanayaan heshiis nabadeed.
Waxay xustay JWXO inay Itobiya dhaqan ka dhigatay inay heshiis nabadeed ka saxiixato qof-qof ay ku qasabtay ama ku qancisay maal iyo jago iyadoo isleh waxaad ku sumcad dilaysaa arintaa jabhadaha iyo mucaaradka kasoo horjeeda, sidoo kalena bulshada caalamka ay ku jahawareeriso. Waxay Itobiya ku jajuubtaa dadkaa inay saxiixaan heshiis iskusi u qoran oo ah inay dhahaan waxaan ka qoomamoonay khaladaadkii aan horey u galnay waxaanan doonaynaa in aan si nabadgalya ah uga qayb qaadano horumarinta ay dawladda hormuudka ka tahay.
Inkastoo raadad cadcad ay jiraan, oy ka mid tahay saraakiisha booliska Kenya ee arinta afduubka loo qabtay, hadana xukuumadda Itobiya waxay weli aanay ka xishoonin inay ku warwaregato sheeko aan jirin iyo iskudaygeedii ahaa inay qasto bulshada oy shaki galiso fal-dambiyeedkii ay gaysatay. Waxaa ka wareeriyay maamulka Itobiya in la qabtay iyadoo faraheeda ay ka muuqdaan dambigii ay ka dhex fulisay Dal Xor ah iyadoo ku xadgudubtay Qaranimadii dalkaa. Todobaadkii tagay dhowr qof oo u hadlay Itobiya waxaa muuqatay inay hadala is-burinaya ku hadleen, iyagoo doonaya inay jahawareer iyo shaki galiyaan arinta afduubka inta ay xukuumadda ka diyaarinayso hadafkay ka lahayd ee ahaa dacaayada.
Af-hayeenkii ugu horeeyay oo sheegtay inuu yahay La-taliyaha M/weynaha Itobiya ee maamulka Ogadenya wuxuu wareysiigii VOA-Somaliga ku sheegay inay labada xubin ay iskood u yimadeen, isla markaana ay joogaan meel ka mid ah dalka Itobiya oy wadahadal kula jiraan xukuumadda Itobiya goor dhowna ay ka hadli doonaan TV-ga Itobiya. Waxaa ku xigay nin dawladda ka socda, Shimelis Kemal, oo ku yidhi Associated Press (AP); “Ma jirto wax xog ah oon ka hayo madax ONLF oo Nairobi laga soo afduubay.” Ugu dambayn, Dina Mufti, oo ah af-hayeenka Wasaarada Arimaha Dibadda oy VOA-Amxaariga ay awreysatay, wuxuu sheegay inuusan ka warheynin meel ay jiraan nimanka la soo afduubay. Wuxuu kaloo ku andacooday inuu xadka Somaliya dheer yahay dadkuna ay soo galaan kana baxaan. Sidaa daraadeed, ay suurtagal tahay inay meel ka soo galeen.
Waxaa halkaa ka muuqda inay wax maagan yihiin, waxayna ONLF aad uga walwalsan tahay noloshii dadkii la-afduubay. Sidaa daraadeed, ONLF waxay ka codsanaysaa Xukuumadda Kenya inay ka codsato Itobiya in loo ogolaado safiirkeeda jooga Adis Ababa inuu soo arko madaxda la af-duubay si loo hubsado xaaladooda nololeed, marka ay Kenya kala hadlayso soo daynta mudane Sulub iyo Cali.
Waxay kaloo ONLF ka codsanaysaa QM, MA, iyo MY inay u diraan guddi soo baadha arinta af-duubka, maadaama lagu xadgudbay cahdigii Geneva iyo Aqoonsiga Caalamiga ee Xuquuqda Aadanah, oy ka dalbaan xukuumada Itobiya inay ixtiraamto xuquuqda ay leeyihiin xubnaha ay so af-duubtay kuna soo celiso meeshii ay ka kaxaysay.
ONLF waxay cadaynaysaa inay Itobiya ka msuul tahay wixii soo gaadha xubniheedii wadahadalka u jogay halkaa, kamana qaadayso Itobiya masuuliyadaa sikastoy u diido falkan ay gaysatay ama u samaysato waxaan jirin oy ku cadaadiso xubnahaa ay af-duubtay.
Waxaa soo saaray war-saxaafadeedkan JWXO.